This baby white-faced capuchin boy monkey, born on May 17, sticks out its tongue at Jungle Island, July 6, 2016, in Miami.
မျက်မှောက်သတင်းလောက အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ (Cherry-pick)
ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်သတင်းလောကမှာ သုံးနှုန်းနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ ဖြစ်တဲ့ Cherry-pick, Rope in, Slip of the tongue တို့ကို တင်ပြထား ပါတယ်။
Cherry (ချယ်ရီသီး) ၊ pick (ခူးတာ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့ လုံးကောက်အဓိပ္ပါ ယ်ကချယ်ရီသီးခူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးဆင်းသက်လာတာ က ချယ်ရီပင်တွေစိုက်ပြီး အသီးတွေကိုရောင်းစားတဲ့ ခြံသမားတွေအနေနဲ့ ချယ်ရီသီးတွေ ရောင်းဖို့ခူးရာမှာ၊အရောင်းလှရလေအောင်၊ အရင်မှည့်မယ့် အသီးတွေကို ရွေးခူးပြီးရောင်းကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအသုံးရဲ့ Idiom သွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က ကိုယ့်အကြိုက် ကိုယ်ရွေးထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်၊၊ ကျမတို့ မြန်မာမှာတော့ အနီးစပ်ဆုံးက ကိုယ်ကြိုက်တာကို ကောက်သင်းကောက်ယူတာနဲ့တူပြီး၊ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိမယ်လို့ ယူဆရတဲ့အချက်တွေကိုရွေးပြီး၊ အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်အောင်လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို အခုသတင်းတွေမှာ လူတွေသိပ်စိတ်ဝင်စားပြီး လေ့လာနေကြတဲ့ ၂၀၁၆ အမေရိကန် သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားရဲ့ ကြားဝင်စွက်ဖက်မှု ရှိမရှိနဲ့ သမ္မတ Donald Trump နဲ့ ရုရှား ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိကို(၂) နှစ်နီးပါးကြာ စုံစမ်းမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေအထူးအကြံပေး Robert Mueller ရဲ့ စာမျက်နှာ (၄၀၀) ကျော် အစီရင်ခံစာကို တည်းဖြတ်ပြီး ဧပြီလ (၁၈) ရက်နေ့က ရှေ့ နေချုပ် William Barr က မထုတ်ပြန်မီ၊ အဲဒီနေ့ မနက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ အစီရင်ခံစာကို အကျဉ်းချုံးပြီး စာမျက်နှာ (၄) ရွက် တင်ပြခဲ့ရာမှာ သမ္မတ Trump ဟာ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း မရှိဘူးဆိုတဲ့ အားသာတဲ့အချက်တွေကိုသာ ထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက် CNN သတင်းတပုဒ်မှာ Four times Barr twisted and cherry-picked Mueller's report ရှေ့ နေချုပ် Barr က Mueller ရဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ထုတ်ပြန်ုချက်မှာ (၄) ကြိမ်တိုင် လှည့်ထားပြီး၊ သူ့အကြိုက် အကျိုးရှိမဲ့အချက်တွေကိုပဲ ရွေးထုတ်တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Jane spent her time trying to “cherry-pick” the best deals before buyinganew car.
Jane က မော်တော်ကားသစ် ဝယ်ယူရာမှာအတန်ဆုံးဈေးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး အချိန်အကုန်ခံ ကြိုးစားရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
(၂) Rope in
Rope in ဟာ ဒီနေရာမှာ ကြိယာ (verb) အဖြစ် အသုံးပြုထားပြီး ကြိုးကွင်းနဲ့ ပစ်ဖမ်းတဲ့သဘောမျိုး တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က နေ့စဉ်ဘဝမှာ တခုခုပြုလုပ်ဖို့ ဆွဲဆောင်တာ၊ တခုခုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်လာအောင်လုပ်တာ၊ အကြုံးဝင်အောင် ဆွဲထည့်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို အမေရိကန်တရားရေးဌာနကဥပဒေအထူးအကြံပေး Robert Meuller ရဲ့ အစီရင်ခံစာကို တည်းဖြတ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်က ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ရာမှာ ရုရှားစွက်ဖက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အိမ်ဖြူတော် ဥပဒေအကြံပေးနဲ့ အထက်လွှတ်တော် ထောက်လှမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ Republican အမတ် ဆက်သွယ်မှုတွေကိုပါ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားတဲ့အတွက် The Politico သတင်းစာကြီးက Mueller report ropes in Senate GOP -- Mueller အစီရင်ခံစာ မှာ GOP လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ Republican အထက်လွှတ်တော်လဲ ပါဝင်ပတ်သက်အောင် ဆွဲထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Joe managed to “rope in” some friends to help him with the birthday party.
Joe က သူ့မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပဖို့ သူငယ်ချင်းတချို့ ရဲ့  လုပ်အားအကူအညီကို ရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်။
(၃) Slip of the tongue
Slip က သာမန်အားဖြင့် ချော်ထွက်သွားတယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ရှိပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အပြောနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် “မှားတယ်” လို့ အဓိပ္ပါယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Tongue (လျှာ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်က လျှာရဲ့  အမှား ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလဲ ရှင်းပါတယ်။ မြန်မာဘန်းစကားအရဆိုရင်တော့ နှုတ်ကနေ မတော်တဆ မှားထွက်သွားတာ၊ တခါတရံလည်း ယောင်ပြောမိလိုက်တာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီအသုံးကို ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းပတ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေအထူးအကြံပေး Robert Mueller ရဲ့  အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကို လေ့လာရာမှာ သတင်းမီဒီယာတွေ ထောက်ပြကြတဲ့ အချက်တွေအနက်တခုက အိမ်ဖြူတော်ပြောခွင့်ရ Sarah Sanders က ၂၀၁၇ မေလက ထိုစဉ် FBI Director James Comey ရာထူးကနေ ထုတ်ပစ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ FBI အမှုထမ်း အတော်များများက ထောက်ခံတာတွေ့ရတယ်လို့ သတင်းထောက်ရဲ့အမေးကို ဖြေခဲ့စဉ်က မတော်တဆ မှားပြောမိတာလို့ Mueller အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့အတွက်၊ PBS ရုပ်သံလွှင့်က Sarah Sanders’‘slip of the tongue’ moment in the Mueller report -- Mueller ရဲ့  အစီရင်ခံစာမှာ Sarah Sanders ရဲ့  အဆိုအရ သူယောင်ပြီး ပါးစပ်က မှားပြောမိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ထောက်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းကြီးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
I am sorry, I called you by your sister’s name. It was “a slip of the tongue”.
ခင်ဗျားကို ခင်ဗျားရဲ့အမ နာမည်နဲ့ မှားပြီးခေါ်မိတာ ကျနော်တောင်းပန်ပါတယ်။ အဲဒါ ပါးစပ်က ယောင်ပြီးထွက်သွားတာပါ။